रोनाल्डोले भने- ‘अब जे गर्छु, युभेन्टसका लागि गर्छु’
विश्वकप फुटबल सकिएसँगै विभिन्न क्लबसँग खेलाडीहरुको आवद्धताको चर्चा चलिरहेको बेला पोर्चुगलका स्टार खेलाडी क्रिष्टियानो रोनाल्डोको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । हालै रियलमड्रिड छाडेर युभेन्टस पुगेका रोनाल्डोले युभेन्टसको अवसरका लागि आभारी प्रकट गरेका छन् । ३३ वर्षका रोनाल्डो रियल मड्रिडबाट ११२ मिलियन युरोमा इटालियन च्याम्पियन युभेन्टसमा अनुबन्धित भएका हुन् । आफ्नो उमेरका खेलाडी सामान्यतया कतार वा […]
रसिया विश्वकपमा कस्ले कुन उपाधि जिते ?
काठमाडाैं । फुटबलको महामेला विश्वकप, खेलाडीका लागि नयाँ सम्भावनाको ढोका अझ फराकिलो बनाउने माध्यम पनि हो । जहां प्रत्येक खेलाडीको व्यक्तिगत प्रदर्शनले नयाँ उचाईको अवसर पाएको हुन्छ । रूसमा सम्पन्न २१ औ संस्करणको विश्वकपले पनि केही खेलाडीको प्रर्दशनलाई उचाईमा पु¥याएको छ । उत्कृष्ट प्रदर्शनकै कारण विविभन्न विधाबाट उनीहरु व्यक्तिगत उपाधि हात पार्न सफल भएका छन् […]
काठमाडौं । विश्वकप अवधिभर सबैभन्दा बढी गोल गरेका खेलाडी हुन् इग्ल्याण्डका ह्यारी केन । उनले ६ गोल गर्दै गोल्डेन बुट हात पार्दा क्रोएसियाका कप्तान लुका मोड्रिचले भने गोल्डेन बल चुम्न सफल भए । सबैले आकलन गरेका फ्रान्सका एम्बाप्पेले युवा स्टार खेलाडीको उपाधि चुमे । इग्ल्याण्डका ह्यारिकेनको विश्वकपमा प्रभावशाली प्रदर्शन रह्यो । गोल्डेनबुटको प्रतिस्पर्धामा रहेका लुकाकु, […]
काठमाडौं । फ्रान्सले दोस्रो पटक विश्वकपको उपाधि जित्दा प्रशिक्षक डीडीएर डेसच्याम्पले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन् । पहिलो पटक विश्वकप जित्दा फ्रान्सेली टिमको कप्तानी गरेका डेसच्याम्प अहिले प्रशिक्षकको रुपमा फिफाको ट्रफी उचाल्ने भाग्यमानी सावित बने । आइतबार भएको फाइनलमा क्रोएशियालाई हराएसँगै उनी खेलाडी र प्रशिक्षक दुवैको भूमिकामा गोल गर्ने तेस्रो व्यक्ति बनेका छन् । सबै […]
काठमाडौं । फ्रान्सले रुसमा सम्पन्न २१ औं संस्करणको विश्वकप फुटबलको उपाधि जित्दै दोस्रो पटक विश्व च्याम्पियन बनेको छ । क्रोएसिया र फ्रान्सबीचको निकै नै रोमान्चक खेलमा फ्रान्स ४–२ गोल अन्तरले विजयी हुँदै विश्वकपको उपाधि चुम्न सफल भएको हो । विजेता फ्रान्सले १८ क्यारेट सुनको ट्रफीसँगै ३८ मिलियन अमेरिकी डलर पुरस्कार राशि पनि हात पारेको छ […]
काठमाडाैँ । फिफा विश्वकप २०१८ को उपाधि फ्रान्सले जितेको छ । अाइतबार साँझ भएको फाइनल खेलमा क्रोएसियालाइ ४–२ गोलअन्तरले हराउँदै उपाधि हात पारेको हो । फ्रान्सले २० वर्षपछि दोस्रो उपाधि जितेको हो। यसअघि फ्रान्सले सन् १९९८ मा पहिलो पटक उपाधि जितेको थियो। यता पहिलो पटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेको क्रोएसियाको उपाधि जितेर नयाँ च्याम्पियन बन्ने लक्ष्य अधुरै […]
डडेल्धुरामा कवर्ड हल भत्कियो
डडेल्धुरा । जीर्ण अवस्थामा रहेको डडेल्धुराको कबर्ड हल भत्किएको छ । लगातारको वर्षाका कारण जिल्लाको एक मात्र कबर्डहल शनिबार भत्किएको हो । अमरगढी नगरपालिका–४ खलंगामा ३४ वर्ष पहिले निमार्ण गरिएको सो कबर्डहल जीर्ण अवस्थामा रहेको थियो । पुरानो संरचना भएको र मर्मतसम्भार नभएकाले अविरल वर्षाका कारण कबर्डहल भत्किएको जिल्ला खेलकुद विकास समितीको भनाई छ । […]
कस्ले चुम्ला विश्वकपको उपाधि, फ्रान्स कि क्रोएसिया ?
एजेन्सी । विश्वकप फुटबलको उपाधिका लागि क्रोएसिया र फ्रान्सबीचको आज प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । आज राति पौने ९ बजे हुने फाइनल खेलमा उपाधि उचाल्ने लक्ष्यका साथ दुबै टिम प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । रसियाको राजधानी मस्कोस्थित लुज्हनिकी रंगशालामा नेपाली समयअनुसार ८ बजेर ४५ मिनेटमा फाइनल खेल सुरु हुनेछ । यो पटकको विश्वकपको उपाधि दौडमा क्रोएसिया नयाँ टिम हो […]
बेल्जियमले विश्वकपमा बनायो तेस्रो स्थान
काठमाडौं । रुसमा जारी विश्वकप फुटबलको तेस्रो स्थानका लागि शनिबार भएको प्रतियोगितामा इङ्ग्ल्याण्डलाई हराउँदै बेल्जियम विश्वकप फुटबलमा तेस्रो स्थान हात पार्न सफल भएको छ भने इंग्ल्याण्डले चौथो स्थानमा चित्त बुझाएको छ । इंग्ल्यान्डविरूद्ध २–० गोलअन्तरले जित हात पार्दै बेल्जियम तेस्रो हुन सफल भएको हो । बेल्जियमको यो अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धी हो । यसअघि सन् १९८६ […]
विश्वकप फुटबलमा तेस्रो स्थानको प्लेअफका लागि आज बेल्जियम र इङ्ल्यान्ड भिड्दै
एजेन्सी । रुसमा जारी विश्वकप फुटबलको तेस्रो स्थानको प्लेअफका लागि आज बेल्जियम र इङ्ल्यान्ड भिड्दै छन् । नेपाली समयअनुसार आज साँझ पौने ८ बजे सेन्टर पिटर्सबर्ग रंगशालामा दुई टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । मंगलबार भएको खेलमा बेल्जियम फ्रान्ससँग पराजित भएपछि फाइनल प्रवेश गर्न सकेको थिएन भने बुधबार भएको खेलमा क्रोएसियासँग पराजित भएपछि इङ्ल्यान्डले पनि तेस्रो […]
चितवनमा डिएसपीसहित ८ जना प्रहरीमा कोरोना भाइरस संक्रमण
विदेशमा अलपत्र नेपालीको निःशुल्क उद्धार गर्न आग्रह
चिनियाँ दूतावास अगाडि नेविसंघको प्रदर्शन, ६ जना पक्राउ